SCIENCE TO SOCIETY: घाम लाएर के भो र न्यानो नभए पछि?
घाम लाग्दा पक्कै पनि तातो छोड्छ प्रिथिबीमा तर तेस्को असर भने अन्य कुरामा भर पर्ने रै'छ। जस्तो हावा। कस्तो हावा लाग्छ? साह्रै चिसो हावा आयो भने त्यसले घामको तातो लाई कमजोर पार्दो रैछ। यो भेग मा घाम त मजाले लाग्छ तर उत्तर तीरको अर्क्तिक तिरबाट आउने चिसो वायुले काठ्ठिने चिसो हुन्छ। आर्क्तिक तीर पनि उज्यालाई देखिन्छ तर सदै भारी हिउ नै हिउ देखिन्छ। अलि अस्तिन क्याम्स जाने आउने क्रममा ध्रुब सरले यस्तै भन्नु भाथ्'यो। बस भित्र बसेर यात्रा गर्दै गर्दा बाहिरको घामले मोहनी लाउछ नि लाउन त। तर बाहिर हिंड्न गार्है पर्छ।